क्रिसमस इभ मनाउने तयारी के छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः पुस ४, २०७६ - साप्ताहिक
यसपालिको क्रिसमस अमेरिकामा धूमधामले मनाउँदैछु, तर कुन ठाउँमा मनाउने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । पक्कै पनि कुनै चर्चमा प्रभुको भजन गाएर मनाउँछु । किनभने मेरो आवाज प्रभुको देन हो ।
अमेरिका जाने योजनामा छु । छोरी उतै भएकाले उनीहरूसँगै मनाउँछु होला ।
शंकर बीसी, मोडल तथा निर्देशक
धेरै काम गरियो । फ्रेस हुनका लागि देशबाहिर कतै जाऊँ कि भन्ने सोचेको छु, तर क्रिसमस त बहाना मात्रै हो ।
कसरी मनाउने भनेर योजना बनाउँदैछु । अस्ट्रेलिया पनि जान सक्छु, साथै नयाँ रेस्टुराँ खोल्ने योजना पनि भइरहेकाले पोखरातिर पनि हुन सक्छु । क्रिसमस पनि मनाउने अनि पोखराका नयाँ–नयाँ रेस्टुराँको आइडिया पनि लिने योजना छ ।
सबिन श्रेष्ठ, अभिनेता
म सबै जात–धर्मलाई माया गर्ने मान्छे हुँ । सबै चाडपर्वलाई सम्मान गर्छु । म हिन्दू भएकाले क्रिसमसको कुनै योजना छैन, तर यो एउटा ठूलो उल्लासमय पर्व हो । मेरा साथीभाइले कतै क्रिसमस विशेष कार्यक्रम राखे भने म त्यहाँ पुगेर रमाइलो गर्छु ।
अहिलेसम्म त्यस्तो योजना केही बनाएकी छैन । साथीहरूसँगै रमाइलो गर्छु होला ।
म सबैलाई सम्मान गर्छु, तर मेरो क्रिसमसमा केही योजना छैन ।
म क्रिसमस कहिल्यै मनाउँदिनँ, किनकि म हिन्दू हुँ । तैपनि क्रिसमस इभ मनाउनेलाई हार्दिक शुभकामना !
विमल अधिकारी, मोडल
घरमा न्यानो भएर बस्ने र मीठो खाने । यही नै हो मेरो क्रिसमस योजना ।
क्रिसमस इभ त परिवारसँगै मनाउने योजना छ ।
एउटा कार्यक्रम गर्ने अनि श्रीमतीसँग कतै एउटा रेस्टुराँमा डिनर जाने । यति नै होला ।
पहिले क्रिसमस इभका दिन प्राय:जसो विदेशमा हुन्थें, तर यसपालि नेपालमै हुने भएकाले अझै रमाइलो हुने आशा गरेको छु । त्यसैले त्यो दिन साथीभाइ अनि परिवारसँग बाहिर गएर रमाइलो गर्ने विचार छ ।
साथीहरूसँग कालिन्चोक गएर हिउँ खेल्ने योजना छ ।
कविर खड्का, अभिनेता
अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै योजना छैन । तुरुन्त कुनै योजना बनिहाल्यो भने सेलिब्रेट गर्छु, नत्र सुटिङ चलिरहेको हुँदा त्यसमै व्यस्त हुन्छु होला ।
नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश भएकाले सबै धर्मप्रति मेरो सम्मान रहनेछ । क्रिसमस इभ मनाउने कुनै योजना नभए तापनि क्रिस्चियन धर्मावलम्बीमा मेरो शुभकामना छ ।
सबै परिवार अनि साथीहरूसँग रातभर रमाइलो गर्ने योजना छ ।
मेरो त्यस्तो कुनै योजना छैन, तर त्यो दिन पुस ९ गते मेरो सांगीतिक प्रस्तुति सुर्खेत महोत्सवमा हुने पक्का भएको छ । त्यसैले दर्शकमाझ गीत–संगीतमा झुमेर/झुमाएर त्यो दिन रमाइलोसँग बित्नेछ ।
म रमाइलो गर्ने प्रकृतिको मान्छे भएकाले मलाई कुनै धर्म, जातजातिका चाडपर्वले केही असर पार्दैन । सबैजसो ठूला चाडपर्वमा खुलेर रमाइलो गरी आनन्द लिने गर्छु । यसपालिको क्रिसमस इभ पनि व्यापक रमाइलो गरी बिताउने योजना छ ।
छोरी शुपलाले घुम्न लानु भनेकी छन् । परिवारसँगै कतै घुमघाम गरेर मनाउनुपर्ला ।
भोलाराज सापकोटा, हास्यकलाकार
प्रकाशित :पुस ४, २०७६